I-LGX Cassette 1 × 32 PLC Optical Splitter SC Connectors High Stability Grey FTTH Network - The Cableonline.com
Ikhebula le-Fiber Optic
Intambo ye-Fiber Optic Patch
Isixando se-Passive Fiber
Iphaneli ye-fiber optic patch
Ama-Attenuator we-Fiber Optic
Ama-adaptha we-Fiber Optic
Outdoor Multimode Fibre optic Ikhebula Black PE Jacket ...
FBT Fibre optic Ikhebula Splitter Nge Iwindi Single, ...
G657A2 Fibre optic Splitter Ukuze Fibre Optical Inzwa ...
LGX PLC Fibre optic Splitter Ibhokisi nge SC APC Simplex ...
Imodi Single Fibre optic Ikhebula, Armored Fibre Ikhebula ...
I-LGX Cassette 1 × 32 PLC Optical Splitter SC Connectors High Stability Grey FTTH Network
Imininingwane Yomkhiqizo Incazelo Igama Lomkhiqizo: I-LGX PLC Splitter 1 * 32 Umbala: Ithempelesha Yokusebenza Okumpunga: -40C Kuya ku-85C MOQ: 1 Pc I-Wavelength Esebenzayo: 1260 ~ 1650 Nm Uhlobo Lwe-Fiber: G657A1 Singlemode 1 * 32 PLC Fibre Splitter LGX Cassette With SC Connectors in I-High Stability Planar Lightwave Circuit (PLC) Splitter uhlobo lwedivayisi yokulawula amandla we-optical eyakhiwe kusetshenziswa ubuchwepheshe be-silica optical waveguide ukusabalalisa amasiginali we-optical kusuka ku-Central Office (CO) kuya ...
Incazelo Yomkhiqizo Oningiliziwe
I-LGX PLC Splitter 1 * 32
1260 ~ 1650 NM
I-Singlemode 1 * 32 PLC Fibre Splitter LGX Cassette ene-SC Connectors ngokuzinza okuphezulu
IPlanar Lightwave Circuit (PLC) Splitter luhlobo lwedivayisi yokulawulwa kwamandla we-optical eyakhiwe kusetshenziswa ubuchwepheshe be-silica optical waveguide ukusabalalisa amasiginali we-optical kusuka eCentral Office (CO) ezindaweni eziningi.
Ama-PLC Splitters asetshenziselwa ukusabalalisa amasiginali we-optical ezindaweni eziningi zokucubungula. Kumanethiwekhi we-optical, kuyadingeka kaningi ukwehlukanisa isinali elibonakalayo libe amasiginali amaningi afanayo, noma ukuhlanganisa amasiginali amaningi abe yisiginali eyodwa. I-PLC Splitter uhlobo lwedivayisi yokulawulwa kwamandla we-optical eyakhiwe kusetshenziswa ubuchwepheshe be-silica optical waveguide.
Zenzelwe i-FTTx ku-PON, CWDM, DWDM naku-Optical cable TV System. Kuphethe futhi ukusabalalisa amasiginali we-Optical Office (CO) aye ezindaweni eziningi.
Sinikeza uchungechunge oluphelele lwemikhiqizo yokuhlukaniswa kwe-1 * N no-2 * N eyenzelwe izinhlelo zokusebenza ezithile. Yonke imikhiqizo ihlangabezana nezidingo ze-GR-1209-CORE-2001 kanye ne-GR-1221-CORE-1999.
Ukusatshalaliswa Kwe-Optical Signal
Lan futhi CATV System
Amanethiwekhi we-Passive Optical (PON)
Uhlelo Lokulinganisa ne-Laser System
Izinhlelo ze-DWDM ne-CWDM
Ukulahleka kokufakwa okuphansi
Ukufana okuhle kwesiteshi kuya esiteshini
Ububanzi bokusebenza obude: Kusuka ku-1260nm kuye ku-1650nm
Ithempelesha lokuSebenza elibanzi: Kusuka ku -40 kuya ku-85 ℃
Ukuthembeka okuphezulu nokuqina
Cha. Into Ipharamitha
1 Ukucushwa 1X32
2 I-Wavelength esebenzayo (nm) 1260 ~ 1650
3 Uhlobo lwe-Fibre G657A1
4 Ukufakwa Kokulahlekelwa (P / A Ibanga Max.dB) 16.5 / 16.9
5 Ukufana Kokulahlekelwa (Max.dB) 1.5
6 I-PDL (Max.dB) 0.25
7 I-RL (Min.dB) 60
8 Ukuqondisa (Min.dB) 55
9 Ukulahlekelwa Kwe-Wavelength Okuncike (Max.dB) 0.5
10 Fibre Ubude (m) 1.5 (± 0.1) noma abanye bachaziwe
11 Ukuqina Kwethempelesha (-40 ~ + 85 ℃, Max.dB) 0.5
12 Ithempelesha elisebenzayo (℃) -40 ~ 85
13 Ukuphathwa kwamandla okuphezulu (mW) 500
Q1. Ngicela i-oda lesampula lalo mkhiqizo?
A: Yebo, samukela isampula yokuhlola nokuhlola ikhwalithi. Amasampula ahlanganisiwe ayamukeleka.
Q2. Kuthiwani ngesikhathi sokuhola?
A: Isampula idinga izinsuku ezingama-3-5, isikhathi sokukhiqiza ngobuningi sidinga amaviki angu-1-2 woku-oda ubuningi ngaphezu kuka-1000.
Q3. Unawo umkhawulo we-MOQ wesampula yoku-oda?
A: I-MOQ ephansi, i-1pc yokuhlola isampula iyatholakala
Q4. Uzithumela kanjani izimpahla futhi kuthatha isikhathi esingakanani ukufika?
A: Sivame ukuthumela nge-DHL, UPS, FedEx noma i-TNT. Imvamisa kuthatha izinsuku ezi-3-5 ukufika. Ukuthunyelwa kwezindiza nolwandle nakho kuyakhethwa.
Q5. Ungaqhubeka kanjani ne-oda lomkhiqizo?
A: Okokuqala usazise izidingo zakho noma uhlelo lwakho lokusebenza.
Okwesibili sicaphuna ngokwezidingo zakho noma ngeziphakamiso zethu.
Okwesithathu ikhasimende liqinisekisa amasampula nezindawo zokufaka imali ngokuhleleka okuhlelekile.
Okwesine Sihlela ukukhiqizwa.
Q6: Ngabe unikeza isiqinisekiso semikhiqizo?
A: Yebo, sinikeza iwaranti yeminyaka emi-3 kumikhiqizo yethu yokwenziwa ngokusemthethweni.
Zonke izihlukanisi zethu ze-PLC zingadlula izinga lokushisa eliphakeme neliphansi ukusuka ku -40C ukuya ku- + 85C ngaphezulu kwama-2000hours.
Ungaqinisekiswa nge-100% ngekhwalithi.
Uyemukelwa ukuxhumana nathi nganoma yisiphi isicelo!
fibre optic ikhebula idabula
Esedlule: I-Steel Tube Metal PLC Fibre Optic Splitter 8 Imibala 0.9mm 1 * 8 Mini 10dB Ukufaka Ukulahleka
Olandelayo: Ukuqina Okuphezulu 1 × 32 PLC Fibre Optic Splitter 1U 19 "Rack Mount 1260 ～ 1650 Nm Wavelength
Incazelo Yomkhiqizo Oningiliziwe Igama lomkhiqizo: I-LGX PLC Splitter 1 * 32Color: Ithempelesha yeGreyWorking: -40C To 85CMOQ: 1 PcOperating Wavelength: 1260 ~ 1650 NmFiber Type: G657A1Singlemode 1 * 32 PLC Fiber Splitter LGX
CATV 0.9mm 1 × 32 PLC Optical Lead Splitter ...
1X16 mini steel steel tube PLC idabula fi fi ...
0.9mm 1 * 2 LC FBT Coupler 1m G652D G657A1
Kwenziwe ngentando PLC Fibre optic Splitter Module 1X64 ...
1310nm 1490nm 1550nm Amawindi amathathu FBT Fibre Khetha ...
1X2 FBT coupler 0.9mm 1m SC APC
Izinkinga nezixazululo zeDrop Fibre Opti ...
Izintambo ze-Fiber Optic & Factory Panel eChina